Iintsuku ezisi-7 zesampulu yexesha lokukhokela:
Izinzile, Iyahlambeka, iayini ilayitiwe
Isinxibo, izihlangu, iibhegi, idyasi, ibhatyi, idyasi, iSuti, iT-shit, iJean, izinxibo zezemidlalo
I-3D Embossed yoShicilelo lweSilicone yokuTshintshela ubushushu iiLeyibhile eziphambili
Ukuya kuthi ga kwiMibala eli-12, Landela iTshati yoMbala wePantone
Ubungakanani obuchongiweyo ngumthengi
UmThengi oqeshwe kwimilo
Iinkonzo zoYilo loMzobo wasimahla
Nge-Express okanye ngoLwandle
Iintsuku ezi-5-7 zokuSebenza
3-5 Iintsuku Zokusebenza
Ubungakanani bepakethe enye:
Umgangatho wethu kuqala ngeebhegi, emva koko upakishwe ngebhokisi.Kananjalo iya kulungelelaniswa ngokwesicelo somthengi.
Ubuninzi (Amaqhekeza) 1-1000 1001-10000 >10000
Bucala ngasekhohlo.Ixesha (iintsuku) 10 15 Kuya kuthethathethwana
Uhlobo lweMveliso: Entsha Custom ingubo 3d abicah logo transfer ubushushu
Umbala, imilo kunye nelogo: Wamkelekile eLungisiweyo, Vumela iLogo yakho ibe yodwa.
Izinto: Ukuhanjiswa kweFilimu yokuShicilela i-PET / iVinyl, i-Ink yokuTshintsha ubushushu, i-Flocking, iPlastiki yeRabha eSoft, iSilikoni eNontoxic, ilaphu leTwill, iMesh Fabric, Isikhumba njl.
Ubungakanani: Ngokuqhelekileyo sebenzisa ubungakanani, yenza ubungakanani obumiselweyo ukuze utshatise iiMveliso zakho.
Uyilo kunye nokuCebisa: Uyilo lwasimahla kunye neNkxaso yeZakhono, Beka iNgcaciso yakho eLungileyo kwiNyaniso.
Ubuchwephesha: Ukushicilelwa: Ukuprintwa kweSikrini seSilikhi, ukuShicilelwa kwe-Sublimation okanye i-CMYK Offset yoShicilelo, iShicilelo lokuTshintshela ngokuThuthwayo, iSilicone yoXinano oluPhezulu (iRubha) yokuTshintshela ukuShicilela njl.njl.
Ubushushu bokudlulisa : 140°C-160°C
Uxinzelelo lokuTshintshela: 4-6kg Cinezela
Indlela yokukrazula : I-Peel eshushu okanye epholileyo 2 Iintlobo zokuKhetha
Ubungcali bethu, Ukwaneliseka kwakho.
Ukuhambisa ngenqanawe: NgoMoya okanye ngoLwandle.SikwiNqanaba eliPhezulu leKhontrakthi yeNkontraka ye-DHL, i-Fedex, i-UPS kunye nezinye iiNkampani ze-International Express.Yenza iimpahla ngokukhawuleza, ngokufanelekileyo nangexabiso eliphantsi ukuze ufikelele kwizandla zakho.
Isicelo: Ukusetyenziswa ngokubanzi kwi-T Shirt, iiMpahla zaBantwana, iGear ye-Athletic, isinxibo, isinxibo sezemidlalo, iyunifomu, iileyibhile zokuPakisha, impahla yangaphantsi, iiglavu, iibhegi, izihlangu, iminqwazi, izipho, imithwalo, ithoyizi, iiMveliso zeTowel, iimpahla zaseKhaya njl.njl.
Ixesha lesampula kunye nexesha elibi: Ixesha lesampulu malunga neentsuku ezi-2-5 zokuSebenza;Ixesha elininzi malunga neentsuku ezi-5-7 zokuSebenza.Yenza into oyifunayo, Cinga ngento oyikhathaleleyo.
Iimveliso eziphambili: Iqhosha lokuqhafaza, iileyibhile zempahla, iqhosha lejeans, iqhosha le-alloy, i-alloy buckle, ileyibhile yesinyithi, iqhosha le-prong lohlobo lwe-snap, isivalo, iqhosha le-ring snap, i-rivet, i-eyelets njalo njalo. Thumela imibuzo
Indlela Yokwenza Isiko
Ngaphambili: Umshicileli weelebhile zokuhambisa ubushushu kwisikipa
Okulandelayo: Iileyibhile ezibonisa ubushushu bempahla
Isitika se-3d seSilicone sokuTshintshela ubushushu
Iileyibhile zokuTshintshela ubushushu
Ileyibhile yokuTshintshela ubushushu beSilicone
Iileyibhile zokuTshintshela ubushushu beSilicone
Iisampulu zasimahla zeplastiki zokuhanjiswa kobushushu kwisikipa...
Umzi-mveliso woshicilelo lwesikrini esibonakalisayo...
Uyilo oluqhelekileyo lomhlambi wentsimbi kwisincamathelisi sokuhambisa ubushushu...
Iilogo zeBrand PET ifilimu eprintiweyo ebonisa ubushushu...
Iileyibhile zokuTshintshela ubushushu Isublimation yoShicilelo lweHeat Press Ubushushu Cinezela iTagless Labels UYilo lwehempe yokuCofa ngobushushu Tee Shirt Press ITagless iileyibhile zokuTshintshela ubushushu